Dawladda Jabuuti oo Carwo Dalxiiska La Xidhiidha ku Soo Bandhigtay Lacagta Somaliland |
HARGEYSA-SOMALILAND– Lacagta shillinka Somaliland ayaa si weyn uga dhex muuqatay, isla markaana noqotay mid soo jiidatay indhaha dadkii ka qeyb galay gaar ahaana kuwii ajaanibka ahaa carwo lagu qabtay dalka Jabuuti, oo lagu xusayay maalinta dalxiiska adduunka oo 27-ka bisha September sanad walba wadamo badan oo caalamka ah laga xuso.
Ban-dhig carweedkaasi lagu xusayay maalinta dalxiiska adduunka oo shalay lagu qabtay hudheelka Kambiski ee magaaladda Jabuuti, ayaa lagu soo bandhigay waxyaabaha qadiimiga ah iyo kuwa hidaha iyo dhaqanka ee ay dadka Soomaalidu caanka ku yihiin. Waxaana la arkayay iyadoo dadkii ban-dhig carweedkan ka soo qayb galay ee ajaanibka ahaa ay si aad ah u xiisaynayeen, isla markaana u daawanayeen lacagta shillinka Somaliland gaar ahaana 1000 shiiling oo ka mid ahayd waxyaabihii carwadaasi lagu soo bandhigay.
Lacagta Somaliland ayaa sida caadiga ah waxay ka mid tahay waxyaabaha taariikhiga ah ee yaalla carwooyinka ama madxafyadda hidaha iyo dhaqanka ee dalka Jabuuti, waxaanay ka mid ah waxyaabaha had iyo jeer sida weyn u soo jiita dadka ajaanibka ah ee booqda goobaha lagu kaydiyo aasaarta qadiimiga ah ee dalka Jabuuti.
Dadkii ajaanibka ahaa ee ka soo qeyb galay ban-dhigaas ayaa la sheegay in ay lacagta Somaliland iibsanayeen, iyagoo u aad u xiisaynayay midabyadeedda iyo sawiradda qurxoon ee ku sharaxan lacagta Somaliland. Waxaana la sheegay in dadkii dalxiiseyaasha ahaa ee carwadaasi joogay in ay 1000 shilling-ka ee lacagta Somaliland ku iibsanayeen $3 dollar oo lacagta Maraykanka ah, iyadoo ay si weyn ugu qanacsanaayeen dadkaasi ajaanibka ah muuqaalka lacagta Somaliland. Dhinaca kale munaasibadaasi oo ay soo qaban-qaabisay wasaaradda dalxiiska ee dalka Jabuuti oo kaashanaysa xafiiska dalxiiska ee dalkaasi Jabuuti, waxa munaasibadaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dalxiiska ee dalka Jabuuti, agaasimaha guud ee waaxda dalxiiska.
Sidoo kale waxaa carwadaas lagu soo casuumay boqolaal dalxiiseyaal ajaanib ah oo kala socday wadamo badan oo caalamka ah, xubno ka socday hay’adaha caalamiga ah ee shaqeeya arrimaha dalxiiska iyo marti sharaf kale.
Carwadan ayaa waxaa lagu soo bandhigay waxyaabo kala duwan oo ka mid ah kuwa hidaha iyo dhaqanka, waxyaabaha qadiimiga ah, oo isugu jiray qalabyo laga farsameeyay dhirta, dhagaxaanta iyo kuwo kale oo badan.
Boqolaal dalxiiseyaal ajaanib ah ayaa ka soo qayb galay bandhigan kuwaasi oo ay qaarkood iibsanayeen alaabooyinkii kala duwanaa ee halkaasi yaallay, halka ay qaarkoodna daawasho u yimaadeen carwadda.
Geesta kale waxaa carwadaasi ka soo qayb galay oo lagu soo casuumay qaar ka mid ah dadka ku caanka ah kuna shaqaysta xirfadda far-shaxanka ee reer Jabuuti, sida samaynta sawirradda iyo curinta qeybaha kala duwan ee far-shaxanadda.
Kuwaasi oo carwadda ku soo bandhigay waxyaabo kala duwan oo ay farsamayeen dhir iyo dhagaxaan, sida Geella oo ka mid ah xoolaha ay Soomaalidu caanka ku tahay, isla markaana inta qorri geed laga farsameeyay oo loo ekaysiiyay neef Geel ah iyo waxyaabo kale.